IScotland ijoyina isiVumelwano seCandelo loLuntu seGeospatial - iGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/IScotland ijoyina iSivumelwano seCandelo loLuntu seCandelo
IiphotographyGeospatial - GISezintsha
Urhulumente waseScotland kunye neKhomishini ye-Geospatial bavumile ukuba nge-19 kaMeyi, 2020 iScotland bayakuba yinxalenye ye Isivumelwano seGeospatial kweli Candelo likaRhulumente elisandula ukwenziwa.
Esi sivumelwano kuzwelonke ngoku siza kuthatha indawo yeSivumelwano seMephu yaseScotland (OSMA) kunye nezivumelwano zaseGreenspace eScotland. Abasebenzisi bakaRhulumente baseScotland, ezenziwe yimibutho engamalungu ali-146 ye-OSMA, ngoku baya kuba nakho ukufikelela kwidatha yokusebenza kwenkqubo kunye nobuchule besebenzisa i-PSGA.
Baza kudibana kunye namalungu ecandelo likarhulumente ukusuka eNgilani naseWales ukufikelela kuluhlu lweedatha zemephu zedijithali kuyo yonke i-Great Britain, kubandakanya iAdilesi kunye noLwazi lweNdlela. I-PSGA iza kubonelela ngenkxaso eyongezelelweyo yezobugcisa kunye nokufikelela kwidatha entsha kwixa elizayo.
I-PSGA entsha kulindeleke ukuba ibonelele ngezibonelelo ezibalulekileyo eziza kubonelela ngolwazi lokuxhasa ukwenziwa kwezigqibo, ukuqhuba kakuhle, kwaye iqhubeke nokuxhasa ukuhanjiswa kweenkonzo eluntwini.
Ngokuka-Steve Blair, u-CEO we-Ordnance Survey, "Siyavuya kuba iSkotlani ijoyine iPSGA isenza isivumelwano sokuqala esidibeneyo se-GB kubathengi kulo lonke icandelo likarhulumente ukufikelela kwiidatha zenkqubo yokusebenza."
"I-PSGA ibonelela ngamathuba anomdla kwinkqubo yokusebenza kunye nabathengi bethu kwaye ndiqinisekile ukuba iya kuvula izibonelelo ezibalulekileyo zentlalo, indalo kunye nezoqoqosho eNgilani, eSkotlani naseWales."
U-Albert King, uMlawuli weDatha kaRhulumente waseScotland, uthe: “Urhulumente waseScotland uyawamkela amathuba aziswa yiPSGA entsha. "Esi sivumelwano siqinisekisa ukuqhubeka kokufikelela kwidatha exhasa ukubonelelwa kweenkonzo zethu zikarhulumente ngexesha apho sixhomekeke kubo kunanini na ngaphambili."
"Ngaphezu koko, kwandisa oku ukubandakanya uluhlu olubanzi lweeseti zedatha entsha kunye neenkonzo ezinokubakho ukuphucula kakhulu iinkonzo zoluntu eScotland ngokuphucula ukwenza izigqibo kunye nokugcina ixesha, imali kunye nobomi."
I-PSGA yaqala nge-1 ka-Epreli ngo-2020 kwaye ijolise ekuzuzeni icandelo likarhulumente, amashishini, abaphuhlisi kunye nezifundo. Kwisivumelwano seminyaka eli-10, inkqubo esebenzayo iya kuhambisa isiza esilandelayo sedatha yendawo ye-Great Britain kwaye iguqule indlela yokufikelela kwabantu, ekwabelaneni ngayo nasekwenzeni idatha yedatha.
Ngolwazi oluninzi undwendwela www.os.uk/psga